Prometheus In The New Age: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ နိုင်ငံရေး မဟာဗျုဟာများ
Prometheus In The New Age
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ နိုင်ငံရေး မဟာဗျုဟာများ
(တော်လှန်ရေး အောင်မြင်ရေး လမ်းညွန်ချက်များ)
အာဇာနည် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ တော်လှန်ရေး အောင်မြင်ရေး လမ်းညွန်ချက်များကို ဗိုလ်ချုပ်ရေးသားခဲ့သော “ကမ္ဘာစစ်နှင့် ဗမာ” ဆောင်းပါးတွင်ပါသော ဗမာ့ထွတ်ရပ်ဂိုဏ်း ၏ လုပ်ငန်းစဉ် အပိုင်းမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။ ယနေ့ ဗမာတမျိုးသားလုံး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော ဖတ်ဆစ်စနစ် ထက်ဆိုးသော စစ်အာဏာရှင်စနစ် အောက်မှ လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲ အတွက် တဖက်တလမ်းမှ အကျိုးရှိစေခြင်းငှာ ရှာဖွေတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သဘောထားချင်းတူသော မည်သည့်နိုင်ငံရေးဂိုဏ်း၊ မည်သည့် အခြားအဖွဲ့အသင်း နှင့်မဆို လမ်းအတူတူ၊ အလုပ်အတူတူလုပ်ရန် အသင့်ရှိရမည်။
တိုင်းသူပြည်သားများ၏ ပိုမိုနိုးကြားမှု၊ လွပ်လပ်ရေးစိတ် ထက်သန်မှုတို့အတွက် အပြင်းအထန် အားထုတ်ရန်လိုသည်။
တိုင်းသူပြည်သား အများအား နေ့စဉ် တာဝန်ခံ၊ ညွှန်ကြားဆောင်ရွတ်မည့် ခေါင်းဆောင်များ ပေါ်ပေါက်လာရန် လိုသည်။
တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် အချိန်အလိုက် ဆောင်ရွတ်နိုင်စေမည့် ငွေကြေး တောင့်တင်းမှုကို ရရှိရန် လိုလေသည်။
အပြောစခန်းမှ အလုပ်စခန်းသို့ အရောက်သွားရမည်။
မည်သည့်ကိစ္စကိုမှ ဆောင်ရွတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ပယောဂထုတ်ရုံနှင့်မရ၊ ဒေသအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကာယအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ သင့်မြတ်မှလည်း အောင်မြင်နိုင်မည်။
လူ ပယောဂလည်း ပါရမည်။ ဒေသအားဖြင့်လည်း သင့်မြတ်ရမည်။ အချိန်အားဖြင့်လည်း ကောင်းရမည်။
လွတ်လပ်ရေးလိုကြောင်း သို့အတွက် အရေးဆိုပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဝါဒဖြန့်ရမည်၊ စည်းရုံးရမည်။
ဝါဒဖြန့်စဉ် တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နိုင်ငံရေး ညီညွတ်မှုကို ရရှိရန် ကြိုးစားရမည်။
နိုင်ငံရေး ညီညွတ်မှု ဆိုသည်မှာ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများ ညီညွတ်ရေးဟု အတပ်မဆိုသာ။
အရေးတော်ပုံ အတွက် ဓါတ်စာကျသော အလုပ်သမား၊ ကျောင်းသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကုန်သည်၊ စာရေးစာချီ။ လယ်လုပ်လယ်သီးစား၊ လယ်ကူလီများ၊ ရှမ်း-ချင်း-ကချင်-ကရင်- ချင်းတောင်များ နယ်များရှိ ဆင်းရဲသားလူထုများ အားလုံး ညီညွတ်မှု၊ သွေးစည်းမှုကို ဆိုလိုသည်။
ဝါဒဖြန့်ရင်း နိုင်ငံရေးညီညွတ်ရေး ရရှိမှု ကြိုးစားရင်း မြို့ရွာဒေသ အလျောက်လည်းကောင်း၊ လယ်သမား ‘ဗမာပြည်တွင် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်’ အလုပ်သမားစသည့် အမျိုးအစား အလျောက်လည်းကောင်း၊ ပေါ်ပေါက်နေသော လက်ငင်းကိစ္စကလေးများမှ ဆူပူလှုံ့ဆော်၍ တိုင်းပြည်ရှိ လူထုအင်အားများကို လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွက် စစ်အင်ကျင်း၍ အပြင်းစစ်ပြင်ရပေမည်။
ပေါ်ပေါက်နေသော လက်ငင်းကိစ္စကလေးများမှ ဆူပူလှုံ့ဆော်၍ တိုင်းပြည်ရှိ လူထု အင်အားများကို လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွက် စစ်အင်ကျင်း၍ အပြင်းစစ်ပြငရပေမည်။
လုံလောက်အပ်သော အင်အားကို ပြင်ဆင်စုဆောင်းပြီနောက်၊ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကို ကမ္ဘာ့တိ်ုက်ပွဲ တိုက်နည်းအမျိုးမျိုးမှ နမူနာယူ၍ ဗမာပြည်နှင့် အသင့်တော်ဆုံးဟု ထင်သောနည်းအရ အဆင့်ဆင့် ခင်းကျင်းရပေမည်။
အစဉ်တစိုက် သဲသဲမဲမဲ လုပ်ငန်းများချ၍ ဆောင်ရွတ်ပါက ပန်းတိုင်ရောက်မည်။
ပန်းတိုင် မရောက်သည့်တိုင်အောင် ဗမာများ မညံ့လွန်းလှလျှင် အကြီးအကျယ် နိုင်ငံရေးအဆင့်အတန်း တိုးတက်ရန် အကြောင်းရှိသည်။
တိုးခဲ့သောပွဲမှ သင်ခန်းစာ အမျိုးမျိုးရပေမည်။ ထိုအခါ နောက်ထပ် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွက် မခဲယဉ်းတော့ပြီ။
ကျောင်းသားလူငယ်များ အကူအညီဖြင့် တိုင်းပြည်အနှံ့ လွတ်လပ်ရေးတရား၊ လက်နက်ဥပဒေ ပယ်ဖျက်ရေးတရား၊ ကမ္ဘာ့အဖြစ်အပျက်အမှန်များတို့ကို အဓိကထား၍ ဝါဒဖြန့်ခြင်း၊
ဗမာ့လက်ရုံးတပ် စသော အပျော်တမ်းတပ်များ ထောင်ခြင်း၊
တရုတ်ပြည် အိန္ဒိယပြည်၊ ဘိလပ် စသော တိုင်းနိုင်ငံများအား လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ စာအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဝါဒဖြန့်ခြင်း၊
ဗမာပြည်အကြောင်း စာအုပ်စာတမ်း ရိုက်ဝေခြင်း၊
တတိုင်းတနိုင်ငံလုံး၏ အင်အားကိုယူသောအားဖြင့် ပြည်လုံးကျွတ်နိုင်ငံရေး အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပခြင်း၊
ယခုအခါ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းမှာ ရှေးကအချိန်မျိုး မဟုတ်သဖြင့် ဗမာမှန်သမျှ ဗမာပြည်သူပြည်သားမှန်သမျှအား နှိုးဆော်တိုက်တွန်းခြင်း၊
ဂိုဏ်းစိတ် ဂဏစိတ်များကို မိမိတို့က ခေါင်းဆောင်၍ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊
အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ ကျောင်းသား သွေးစည်းမှုများ၊ ရှမ်း-ကရင်-ကချင်-ချင်း အစရှိသည်တို့နှင့် တသွေးတစိတ်တည်း ရှိမှုတို့အတွက် ကြိုးစားခြင်း၊
တိုင်းရင်းသားများ၊ အောက်တန်းစားများ၊ အစိုးရအရာရှိ အမှုထမ်းများ အားလုံးအား လွတ်လပ်ရေးသည် ၎င်းတို့အတွက်ပါ ဖြစ်သည်ဟု သိစေခြင်း။
ပြိုင်တူ ပေါ်ပေါက်လာသော အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ ကျောင်းသား၊ ဈေးသူဈေးသား အခွန်ထမ်း အစရှိသော ကိစ္စများနှင့် ပတ်သတ်၍ အရေးတော်ပုံကလေးများကို အမှီပြု၍ လွတ်လပ်ရေးအကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအကြောင်း၊ စစ်အကြောင်း၊ လက်နက်ဥပဒေ ပယ်ဖျက်ရန်အကြောင်း အမြဲဝါဒဖြန့်ရမည်။
ထိုအရေးတော်ပုံကလေးများသည် လာမည့်အရေးတော်ပုံကြီး၏ ရှေ့ပြေးမျှသာဖြစ်ကြောင်း တိုင်းသူပြည်သားများ၏ဆိုင်ရာ စီးပွားရေး၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ နိုင်ငံရေးဆောင်းဆိုချက် အရပ်ရပ်မှာ လွန်လပ်ရေးအပေါ်တည်ကြောင်းကို တိုင်းပြည်အား သိစေရမည်။
လွတ်လပ်ရေးဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်အတွင်းတွင် အဆိုသွင်းရုံနှင့်မရ၊ လွှတ်တော်အဆိုမှာ ဝါဒဖြန့်ရုံလောက်သာ ရှိသည်။
လွတ်လပ်ရေးဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်အတွင်းတွင် အဆိုသွင်းရုံနှင့်မရ၊ လွှတ်တော်အဆိုမှာ ဝါဒဖြန့်ရုံလောက်သာ ရှိသည်။ အလုပ်လုပ်ရပေမည်။ လုပ်မှရမည်။ အိပ်နေ၍မရ။ တဦးတည်းဗိုလ်၊ တဦးတည်းနောက်လိုက် လုပ်၍မရ။ မဲဝယ်၍မရ။ ရာထူး လိုက်နေ၍မရ။ အော်ရုံဖြင့်မရ။ အနစ်နာခံ၊ အဆင်းရဲခံ။ အပင်ပန်းခံ၊ အစတေးခံကြမှရမည်။ သို့သော် ဆောင်ရွတ်လျှင် ငါတို့သည် အောင်ပန်းကိုမချွတ် လက်လှမ်းနိုင်မည်။
လူတို့၏ဝတ္တရားကား ဤဓနရှင်စနစ်အကြောင်း အကျိုးတရားများကို လေ့လာပြီးလျှင် အချိန်ကျလျှင် အသင့်ဖြစ်စေရန် စီမံထားရန်ပင်ဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ရာ၌ လူမျိုးအချင်းချင်း၊ လူတန်းစားအချင်းချင်း၊ မကွဲထိုက်သင့်အချိန်တွင့် မကွဲထိုက်သူများနှင့် မကွဲကွဲအောင် လုပ်တတ်သော နယ်ချဲ့စနစ်၏ ပရိယာယ်ကို သတိပြုရမည်။
ရှေ့လောခြင်း၊ စစ်မရောက်ခင် မြှားကုန်ခြင်း၊ စစ်မဖြစ်ခင်က အရှုံးပေးလိုခြင်း စသော အပြုအမှုများကိုရှောင်ရမည်။
ငါတို့၏ အောင်ပွဲကား အသေအချာပင်ဟု ယုံကြည်စိတ်ထားရမည်။
အချိန်ကောင်း၊ အခြေအနေကောင်းတွင် လွတ်လပ်ရေးအတွက် အပြင်းအထန်
ကျောင်းသားတစ်ဦး (ဘလော့ခ်ဂါ အလင်းဆက်) မှ တွေးဆ၊ ရှာဖွေ၊ ရေးသား တင်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by အလင်းဆက် at 1:44 AM
Prometheus အကြောင်း အကျဉ်းချုပ်
In Greek mythology, Prometheus (Ancient Greek: Προμηθεύς, "forethought") isaTitan, the son of Iapetus and Themis, and brother to Atlas, Epimetheus and Menoetius. He wasachampion of human-kind known for his wily intelligence, who stole fire from Zeus and gave it to mortals. Zeus then punished him for his crime by having him bound toarock whileagreat eagle ate his liver every day only to have it grow back to be eaten again the next day.
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောတဲ့ ‘ နိုင်ငံရေး နှင့် လူယ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က “လွတ်လပ်ရေးဆိုသည်မှာ လွှတ်တော...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရေးတဲ့ ကျောင်းသား နှင့် ကျောင်...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်မှာခဲ့သော သတ္တိ နဲ့ သစ္စာ
စစ်ခွေးတို့၏ အလံသစ် နှင့် အောက်လမ်း အစီအမံ
ခွေးခြင်္သေ့ နှင့် ကြိုးနီစနစ် (ချစ်င်္စဝင်း)
အကျဉ်းခံ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗဲလ်ဆုရှင်ကြီး လီရှောင်...
Dog Eat Dog Election (Poem)
ဆရာ မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) ရေးတဲ့ “ခွေးခြင်္သေ့” ...